Tidaidzei: + 86-15176918352
Dombo Wouru Insulation
Kuchengetedza Zvinhu Zvekunze Nzvimbo
Insulation Zvishandiso Kune Kunze Kwenzvimbo Chokwadi, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekunze kwepombi kuputira zvinhu, izvo zvinogona kunge irabha, girazi mvere, aluminium silicate, dombo mvere, etc. Iyo chaiyo iyo yekushandisa inoenderana netembiricha yemidziyo uye yepakati iyo iyo pombi inotakura. ...
Chii Chinokanganisa Thermal Performance Yekuvhara Zvinhu
Iyo yekupisa kuputira mashandiro indekisi yeiyo yekupisa inoisa zvinhu inotsanangurwa neanopisa kudziyisa kweicho chinhu. Iyo diki iyo yekushisa inoitisa, zvirinani iyo yekupisa yekuisa kuita. Pakati pese, zvinhu zvine kupisa kwemagetsi zvisingasviki 0.23W / (m · K) zviri cal ...
Girazi Wool Zvigadzirwa Pfupi Sumo
Girazi mvere inowanzo kuve yakakamurwa mugirazi makushe akanzwa uye girazi mvere bhodhi. Girazi mvere yakanzwa inowanzo shandiswa mumatenga, matenga, uye matenga edare senzvimbo yekupisa. Girazi mvere bhodhi inowanzo shandiswa mukuvaka kwemadziro, senge remadziro emukati uye ekunze madziro ekupisa kwekushisa. Girazi zvigadzirwa zvemvere ...
Zvakanakira Beihua Mineral Fiber Bhodhi
Ndezvipi zvakanakira yedu yemaminerari fiber bhodhi? 1. Mineral fiber bhodhi inoshandisa mhando yepamusoro yemaminerari mvere sechinhu chakakosha mbishi, 100% isina asbestosi, uye isina guruva rakafanana nesero. Haizopinde mumuviri wemunhu kuburikidza nemugwagwa wekufema uye haina kukuvadza kumuviri wemunhu. 2. Uchishandisa composite fiber uye ...
Iro zita rizere rebhodhi rakabuditswa rinonzi extruded polystyrene foam board, inozivikanwa seXPS bhodhi. Polystyrene foam inopatsanurwa kuita mhando mbiri: inowedzerwa EPS uye inoenderera yakabuda XPS. Inofananidzwa neEPS bhodhi, XPS bhodhi ndicho chizvarwa chechitatu chakakomberedzwa chine furu yekuisa zvinhu. Inokunda ...
Ndezvipi Zvinhu Zvisina Ruzha Zvinogona Kushandiswa MuIye Mahofisi Mahofisi?
Munzanga yazvino, nharaunda yekunze ine ruzha. Hazvisi nyore kuwana yakadzikama nzvimbo yehofisi. Kune ruzha rwakawanda mukati nekunze kwezvivakwa. Naizvozvo, yakanaka yekurira yekushongedza zvinhu inodiwa kune izvo zvivakwa, kunyanya kune hofisi environ ...
Kudonha Ceiling 2 × 4 Acoustic Ceiling 2 × 2
Iyo siringi matiles saizi akasiyana kubva kune nyika kuenda kune imwe nyika. Semuenzaniso, kuChina, mamwe matenga esiling saizi iri 595x595mm, iwo metric saizi. Ipo, dzimwe nyika dzinoshandisa yeBritish unit, 2 × 2, kana 2 × 4, nezvimwe.
Kuenzanisa Kwezvinhu Zvekudenga
Kune akawanda marudzi ezvivakwa mumusika. Dzimwe nguva taigona kuvhiringidza kuti ndechipi chinhu chemidziyo chatinoda uye dzimwe nguva mushure mekuwana ruzivo rwezvinhu zvekuvakisa izvi, tinoramba tiri munyonganiso. Kusarudza chaiyo, kwete iyo inodhura. Kunyangwe zvimwe zvinhu zvichinakidza ...
Kutarisira mberi kubatana newe!kubvunza
2020 Kugadzirwa kwatangazve